DHAGEYSO:Puntland oo laga hirgelinayo warshad biyaha badda lagu beddelayo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Puntland oo laga hirgelinayo warshad biyaha badda lagu beddelayo
DHAGEYSO:Puntland oo laga hirgelinayo warshad biyaha badda lagu beddelayo
Waxaa markii ugu horreysay deegaannada Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland laga hirgelinayaa Warshad biyaha badda u beddelaysa kuwa macaan oo la cabi karo taasoo ay Maamulka Puntland ay ka caawinayso Hay’adfa Save The Children.
Warshadaan ayaa waxaa laga dhagax dhigay Degmada Xaafuun ee Gobolka Bari.
Qaar ka mid ah Bulshada ku Nool degmada Xaafuun ee ka faa’iidaysanaya Mashruucaan ayaa Soo dhaweeyay.
Waxaa ayna Sheegeen inay dhibaato ku qabeen Biyaha dhanaanka ah ee Badda sidoo kalena ay degmada Xaafuun iyo deegaanada kala ee ku dhow dhow ka jireen dhibaatooyin dhanka Biyaha ah.
Previous articleHoggaamiyaasha Maraykanka iyo Afghanistan oo kulan yeelanaya
Next articleDowladda oo sheegtay in 300 oo dhallinyaro ah ay ka soo baxeen Al-Shabaab